माप्य गाउँपालिकाको नेकपाले सक्यो वडाहरुको सपथ ग्रहण - Sagarmatha Online News Portal
माप्य गाउँपालिकाको नेकपाले सक्यो वडाहरुको सपथ ग्रहण
सोलुखुम्बु । माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको नेकपा गाउँपालिका कमिटीले सबै वडाहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
७ वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा ३ नं. वडाको सपथ ग्रहण गराएसँगै आइतबारदेखि वडा कमिटीहरुको सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको हो । ६ वटा वडाहरुमा केही समयअघि नै सपथ ग्रहण गराईसकिएको भए पनि ३ नं. वडामा भने प्राविधिक कारणले सपथ ग्रहण गराउन ढिलाइ भएको नेकपा, माप्य दुधकोशी गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष गौरव राईले जानकारी गराए ।
कार्तिक २ गते वासा, खास्ताममा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा नेकपा, सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानबीर राईले वडा कमिटीका अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । पूर्व एमालेका ठगिन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कमिटीको सचिवमा पूर्व माओवादीका सवास राई रहेका छन् । तर कमिटीका स्वयं अध्यक्ष भने सपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि मानवीर राईले आफूमा केही गुनासा र असन्तुष्टीहरु रहेमा पार्टीको आफ्नो निकायमा राख्न अनुरोध गरेका थिए । ‘अब तपाईंहरुले आधिकारिकता पाउनुभएको छ । तपाईंहरुको आफ्नो निकाय छ । यदि तपाईंहरुको कुनै गुनासोहरु छन्, असन्तुष्टीहरु छन् भने आफ्नो त्यो निकायमा राख्नुहोला । सार्वजनिक रुपमा पार्टीको बदनाम हुनेगरी टिपप्पणी नगर्नुहोला’ राईले भने ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै १ नं. प्रदेश कमिटी सदस्य ठमनाथ पराजुली (ध्रुब)ले कम्युनिष्ट पार्टीका हरेक सदस्य उत्पादनसँग जोडिनेपर्ने बताए । ‘हामी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु उत्पादनमा जोडिनुपर्छ । श्रमसँग जोडिनुपर्छ’, पराजुलीले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका जननिर्वाचित अध्यक्ष तथा नेकपा सोलुखुम्बुका सचिवालय सदस्य बुद्धिकिरण राईले आफ्नो गाउँपालिका विकासका दृष्टीले सोलुखुम्बुकै पहिलो भएको बताए । ‘हाम्रो गाउँपलिकाको स्युरीम्या (महभीर)मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रक क्लाइम्बीङ सेन्टर बन्दै छ । खास्तापमा सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय तहमा रक क्लाइम्बीङ सेन्टर निर्माण भइसकेको छ’ राईले भने, ‘अब हामी स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दै छौं । त्यसका लागि हामीले विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेका छौं ।’ कार्यक्रममा उनले प्रतिपक्षीहरुले छरेको भ्रममा नपर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा नेकपा सोलुखुम्बुका सचिवालय सदस्य आसकुमार राई (शिशिर)ले प्रशिक्षणात्मक भनाई राखेका थिए । कम्युनिष्टहरु सर्वहारावर्गको प्रतिनिधि भएको बताउँदै आफ्नो वर्गको हितमा प्रतिवद्ध भएर अघि बढ्न उनले निर्देशन गरेका थिए । कार्यक्रममा नेकपा, माप्य दुधकोशीका अध्यक्ष गौरव राईले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा पार्टी एकीकरण प्रक्रियामै रहेकाले एकअर्कामा बढिभन्दा बढि घुलमील भएर जानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला कमिटी सदस्यहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, जुनितामाया मगर, गणेशकुमार राई (बसन्त), प्रकाश खालिङ, अजय किरातीलगायतले प्रशिक्षणात्मक भनाई राखेका थिए ।
वडा कमिटीको विवरण
अध्यक्षः ठगिन्द्र कार्की
सचिवः सुवास राई
सदस्यहरुः जितबहादुर कार्की
दिवस एलीसा राई
लाल बहादुर विश्वकर्मा
लाल बहादुर राई
खेम प्रसाद राई
शिव बहादुर राई